Horumarinta gaadiidka AI oo leh AIFPv3: diyaaradaha AI ma muujiyaan ... Sababta
Su'aal Horumarinta gaadiidka AI oo leh AIFPv3: diyaaradaha AI ma muujiyaan ... Sababta
1 sano 8 bilood ka hor #801 by laurentCazorla
Waxaan abuuray filimkayga gaarka ah ee Cevenn'air oo leh FSX aasaasiga ah B738 iyo CRJ700 Waxaan naftayda ku riday aniga iyo aniga oo aan duulimaadyo leh. Si kastaba ha ahaatee waxaan rabay in aan abuuro gaadiidkayga AI oo leh AIFPv3 ... Wax kasta waa wax fiican in la dhiso duulimaadyada AI oo dhejiyo, Marka aan bilaabo FSX Steam waxay u soo guurineysaa sida muuqaal cusub laakiin markaan tago Garoonka diyaaradaha ee loo malaynayo si ay u soo tusaan Garoonka diyaaradaha, waqtigaan waxaan la jaan qaadayaa AIFP, midkoodna wuxuu muujinayaa ... Waxaan weydiinayaa haddii ay tahay FSX Steam. Xaqiiqdii markaan rabo in aan AIFP la sameeyo Steam (SE) ma sii socon karo. Anigu waxaan ku qasbanahay inaan u sameeyo FSX. Waxaan horeyba u ahaa ganacsigii adduunka ee AI waxaanan isku dayey inaan dejiyo KLM WoAI B738 duulimaad EHAM / LFMT, waxaan la kulmay isla dhibaatada ...
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto hab kale oo loo sameeyn karo ganacsiga AI oo aan u gudbin AIFP ... waxaan dareemayaa waxoogaa jahwareer ah
Aad ayaad u mahadsantahay
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.284